အံ့ဖွယ်ထူးခြား ” ရွှေကံကူ လေပျံသစ်တော်ဘုရား” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » အံ့ဖွယ်ထူးခြား ” ရွှေကံကူ လေပျံသစ်တော်ဘုရား”
အံ့ဖွယ်ထူးခြား ” ရွှေကံကူ လေပျံသစ်တော်ဘုရား”
Posted by mandalarthu on Nov 30, 2011 in Buddhism, Creative Writing | 35 comments
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ (၂၇-၁၁-၂၀၁၁)နေ့ နေ့ လည် က မမျှော်လင့်ဘဲ ကျွန်မအလွန်ထူးဆန်းသော ဘုရားတဆူကို ဖူးခွင့် ကြုံခဲ့ ရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းရဲ အိမ်မှာ “ရွှေကံကူလေပျံသစ်တော်” ရုပ်ရှင်တော်မြတ် ပင့် ဆောင် ပူဇော်ပွဲ နှင့် ဘုရားအနေကဇာတင် တိုက်တက်ပွဲ ကို လာရောက် ရန် ဖိတ်ကြားခဲ့ သောကြောင့် သွားရောက်ခဲ့ ရာမှ အလွန်ထူးဆန်းသော“ရွှေကံကူလေပျံသစ်တော်” ဘုရား ကို ဖူးမျှော်ခွင့် ရခဲ့ ပါတယ်။
နေရာက ၃၉x၄၀ကြား ၊၆၅x၆၆လမ်း ကြား၊န၀ရတ်လမ်းသွယ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာ (၂၆-၁၁-၂၀၁၁)နဲ့ (၂၇-၁၁-၂၀၁၁) ထိ နှစ်ရက် အပူဇော်ခံပြီး (၂၈-၁၁-၂၀၁၁)မှာ စိန်ပန်းမှာ (၁)ရက်အပူဇော်ခံကာဒီနေ့(၂၉-၁၁-၂၀၁၁)မှာတော့ ရန်ကုန်ကို ဒေသစာရီ ခရီးကြွမြန်းအပူဇော်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်
“ရွှေကံကူလေပျံသစ်တော်” ဘုရားရဲ့ ထူးခြားမှုတွေကတော့အံ့ မခန်းပါဘဲ။့ အထူးခြားဆုံး အချက်ကတော့ မိမိလိုသောဆုကို အဓိဌာန်တောင်းဆိုက ပြည့် နိုင်ကြောင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်အိမ်ပိုင်ဆိုင်လိုသူများကဘုရားပလင်တော်ကိုဘုရားကိုရည်မှန်းလှူဒါန်းပါကမကြာမီ ကိုယ်ပိုင်အိုးအိမ်ပိုင်ဆိုင်ကြကြောင်း သိခဲ့ ရပါတယ်။လြှူဒါန်းနေသူများကိုလည်း မြင်တွေ့ ခဲ့ ရပါတယ်။
ထိုနေ့ကကျွန်မမှာကင်မရာမပါသွားသောကြောင့်မှတ်တမ်းတင်မရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါ။ကံအားလျော်စွာ ဘု၇ားသမိုင်းနှင့် ဓာတ်ပုံများဝယ်ယူပူဇော်ခွင့် ရခဲ့ လို့ ယခုလို မျှဝေနိူင်ခဲ့ တာ ပါ။
၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ မေလတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊မော်လိုက်ခရိုင်၊ ဖောင်းပြင်မြို့နယ်၊ အထက်ချင်းတွင်း သစ်ထုတ်ရေးဒေသ မိုင်းချောင်း အကွက် (၂၄)ရှိ တွန်နိမ်ရွာနှင့် မဲဒင်းလေးရွာတို့မှ (၅) မိုင်ခန့်ကွာဝေးသော တောတွင်း တစ်နေရာမှ ရရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သစ်ပျံတော်သည် ရေကြီးချိန်များ တွင် မူလငုတ်ရင်းနေရာသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလေ့ရှိကြောင်း၊ ၎င်းတုံးကြီးပေါ်တွင် အ၀တ်များ လျှော်ဖွတ်မိပါ က ဖျားနာခြင်း၊ ၀မ်းလျောခြင်းများဖြစ်ပွားကြောင်း၊ ၎င်းတုံးပေါ်တွင် သား၊ ငါးများ ခုတ်စင်းမိပါက ရောဂါဘယ အမျိုးမျိုးဖြစ်ပွားခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ် အမျိုးမျိုး ကျရောက်ခြင်းများနှင့် ကြူံတွေ့ ရကာ နောက်ဆုံးတွင် အသက် ဆုံးရှုံးကြောင်းတို့ ကို ဒေသခံများမှ သတင်းပို့ ပြောပြကြပါသည်။
၎င်းသစ် ထူးခြားပုံအား မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ သွားရောက်သယ်ယူ၍ စစ်ဆေးခဲ့ရာတွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၉၀)ကျော်ကာလ အင်္ဂလိပ်လက်ထက် BBC(ဘုံဘေဘားမားကုမ္ပဏီ)၏ တံဆိပ်ဟောင်းပါရှိပြီး သစ်နံပါတ်မှာ( ၉၉၉)ဖြစ်ပါသည်။ အလျားမှာ ( ၂၇)ပေ နှင့် လုံးပတ် (၇)ပေ (၂) လက်မ ရှိကြောင်း တွေ့ ရှိ ရပါ သည်။ ထူးခြားသည့် သစ်ပျံတော်သည် ဆွေးမြေ့ခြင်း၊ ဟောင်းနွမ်းခြင်းမရှိဘဲ၊ လတ်ဆတ်လျက် ရှိပါသည်။
၎င်းထူးဆန်းသော သစ်အပိုင်းအား တစ်ဆင့် လက်ခံရရှိသော မော်လိုက်မြို့ မှ ဦးမောင်မောင် + ဒေါ်ညွန့် ရီ(မောနင်းစတား- ကဖီး)တို့ သည် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်(၂) ဆူနှင့် ရှင်သီဝလိ ရဟန္တာရုပ်ပွားတော် နှစ်ဆူ ထုလုပ်ကိုးကွယ်၍ (၉.၉.၁၉၉၅) ရက်နေ့ တွင် မန္တလေးတိုင်း၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ စဉ့်ကိုင်မြို့ ၊ ရန်အောင်မြင် ရပ်ကွက်ရှိ မိခင်ကြီး အမေကောင်း နှင့် ညီမ ဒေါ်နွဲ့ နွဲ့ အေး (ပညာရေးဌာန)၊ ဒေါ်ခင်ခင်ထွေး(ပညာရေးဌာန-ငြိမ်း) နှင့် ညီ ဦးဘိုဘို(ဘ/က ပညာရေးဌာန)တို့ ထံသို့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူနှင့် ရှင်သီဝလိ ရဟန္တာရုပ်ပွား တော်တစ်ဆူတို့ ကို ပင့်ဆောင်ပေးပို့ ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းရုပ်ပွားတော်များတွင် ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်များ ကိန်းဝပ်နေခြင်း၊ ရုပ်ပွားတော် ထုလုပ်ချိန်တွင် ထူးခြားသော နက္ခတ်ကောင်းများနှင့် ကြုံကြိုက်ခြင်းတို့ ကြောင့် တစ်နေ့ တစ်ခြား တန်ခိုးတော်များ ကြီးမားလာကာ (၉.၉.၁၉၉၉)ရက်နေ့ မှစ၍ “ ရွှေကံကူလေပျံသစ်တော်” ဘုရားအဖြစ် ထင်ရှားစွာ ပွင့်ထွန်းပေါ်လာတော်မူခဲ့ပါသည်။
ဘုရားရှင်သည် အခါအားလျော်စွာ အရပ်မျက်နှာများသို့ပြောင်းကြွတော်မူလေ့ရှိခြင်း၊ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ကြွမြန်းတော်မူလေ့ရှိခြင်း၊ မျက်နှာတော် ပြုံးတော်မူလေ့ရှိခြင်း၊ မျက်လုံးတော် ဖွင့်တော်မူလေ့ ရှိ ခြင်း၊ နှုတ်တော်ဖွင့်တော်မူလေ့ရှိခြင်း၊ ကိုယ်နေရာအနှံ ရောင်ခြည်တော်များ ကွန့် မြူးတော်မူလေ့ရှိခြင်း၊ ပင့် ဆောင် ဖူးမျှော်သူသာဝကများကိုအိမ်မက်ပေးတော်မူလေ့ရှိခြင်း၊ လှူဒါန်းသော ပန်းအဖူးအငုံ(သဘာဝပန်း၊ ပ လပ်စတစ်ပန်း၊ စက္ကူပန်းများ) စက္ကန့် ပိုင်းအတွင်း ပွင့်တော်မူစေခြင်း၊ လှူဒါန်းထားသော သောက်တော်ရေများ ဆူဝေတော်မူခြင်း၊ ကျောင်းဆောင်သော့ခတ်ထားရှိရာမှ တန်ခိုးတော်ဖြင့် မှန်ဖွင့်ထွက် ကြွတော်မူခြင်း၊ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ကူးပူဇော်ရာတွင် ပကတိမျက်စိဖြင့် မတွေ့ မြင်ရသော အစောင့်အရှောက် ပုဂ္ဂိုလ်များ ပေါ်ပေါက်လေ့ရှိခြင်း၊ ဘွဲ့ တော်သည် အိမ်မက်ဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာခြင်း(၂၀၀၃ ခုနှစ်၊မေလ) ရန်ကုန်မြို့ တွင် မကိုဋ်စလွယ်တော် ရေ စက်ချ လှူဒါန်းချိန်တွင် တစ်ခန်းတည်း ငလျင်လှုပ်ခြင်း(၂၀၀၄ ခုနှစ်၊မေလ) ရန်ကုန်မြို့ သမိုင်းဘူတာ ရပ်ကွက် ၊ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားရာတွင် နိမ္မိတရုပ်ပွားတော် ပေါ်ပေါက်လာ၍ မီးငြိမ်းသတ်ခြင်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ “ ရွှေကံကူလေပျံသစ်တော်” ရုပ်ရှင်တော်မြတ်သည် မန္တလေးတိုင်း၊ စဉ့်ကိုင်မြို့ နယ်၊ ရန် အောင်မြင် ရပ်ကွက်၊ဘုရားအမကြီး အမေကောင်း၏ နေအိမ်တွင် သီတင်းသုံး သပ္ပာယ်တော်မူလျက်ရှိသည်။ ပါရမီဆက် သာဝကများတို့ ၏ ပင့်ဆောင်ပူဇော်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နံတစ်လျား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် မြို့ ရွာအနှံ အပြားသို့ဒေသစာရီ ခရီးများ ကြွမြန်းတော်မူလေ့ရှိပါသည်။
၂၀၁၁ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ(၂)ရက်မှာတော့မန္တလေးကိုတဖန်ကြွရောက် အပူဇော်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။ ကြွရောက်မယ့် နေရာကိုတော့ အတိအကျ ယခုထိ မသိရ သေးတာကြောင့်ထို၇က်ပိုင်းတွင်မန္တလေးသတင်းစာတွင်စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုကာဖူးမြော်လိုသူအပေါင်း သွားရောက်ပူဇော်နိူင်ပါသည်။
ကျေးဇူး္ပ္ပပါဗျိုးဒီလိုဖူးရတာတင် ဝမ်းသာမိပါတယ် သာဓု သာဓု သာဓု
ထူးခြား ချက် ကတော့ အြ ချ လောက် အောင်ပါပဲ။
ဖူးခွင့်ရ လို့ ကျေးဇူးပါ မန္တလာ သူရေ။
ပြောရင်လည်း ၀ိုင်းဆဲကြမယ်ထင်တယ်နော် ဒါပေမယ့် မနေနိုင်လို့ ပြောပြီဗျာ
ဘုရားကိုလူတွေက လာဘ်လာဘ အတွက်ပဲ ကိုးကွယ်နေကြတယ်ထင်တယ် ဒီလိုမျိုးဘုရားဆို လှူတဲ့လူ အလွန်ပေါတာပဲ ကန်တော့ဗျာ မတတ်နိုင်ဘူး ဘုရားက ( လာဘ်ခေါ်ရုပ် ) မဟုတ်ပါဘူး လူတွေ အယူလွဲကုန်ကြပြီ ဘုရားဟောခဲ့တာက သံသရာက လွတ်ကြောင်းတရားတွေပါ ငွေရဂါထာတွေ မပါဘူး ထင်ပါတယ် နောက်ပြီး ရှိတဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာ ( ရှင်ဘုရင် နဲ့ စင်္ကြာဝတေးမင်းဖြစ်နိုင်ခွင့် ) တွေကို စွန့်ပယ် ဇနီးနဲ့သား မိသားစုတွေအားလုံးကို စွန့်ပြီး အများအကျိုးအတွက် ဘုရားအဖြစ်ရောက်ခဲ့တာကိုများ မစဉ်းမစားလူတွေ ဘုရားကိုယ်ပေါ်မှာ ရွှေတွေငွေတွေ ဆင်ထားလိုက်တာများ ကြည့်လဲ လုပ်ကြပါဦးဗျာ ကြည်ညိုတာက ကြည်ညိုတာပေါ့ ဒါပေမယ့် ဘာပဲပြောပြော အကျိုးလိုလို့ ညောင်ရေလောင်းတာကတော့ လွန်တယ်ထင်ပါတယ်
ခုလို ပွင့် ပွင့် လင်းလင်းနဲ့ ကိုယ့် အမြင်ကို ဖော်ထုတ်ပြတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ဒီပို့ စ်တင် တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အံ့ ဖွယ်ထူးခြားတဲ့ ဘုရားတဆူကို မသိသေးသူများ သိရှိစေပြီး
သွားရောက်ဖူးမြော်စေချင်တဲ့ စေတနာ သက်သက် ပါ။
အကျိုးမျှော်ပြီး ညောင်ရေ လောင်းဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။
ပုံတော်ကို အာရုံပြုပြီး ဖူးမြော်ကြည်ညိုတာထက် ဂုဏ်တော်ကို အာရုံပြုပြီး ဖူးမြော်တတ်မှသာ
နှလုံးသားမှာ ဘုရားတည်တာဖြစ်တာမို့ 
မှန်ကန်စွာ ကြည်ညိုတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
တင်ပေးတာကိုတော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ကုသိုလ်မရ ငရဲရမှာစိုးလို့ပါ ဝေဖန်အပြစ်တင် တာတော့မဟုတ်ပါဘူး လူတွေက ဘုရားကို ဘုရားလို့မမြင်ပဲ တန်ခိုးရှင် လိုတရ ဖန်ဆင်းရှင်တစ်ဦးအနေနဲ့ မြင်သွားမှာစိုးလို့ပါ အခုလို အမြင်ရှိတဲ့အတွက်လည်း ၀မ်းသာပါတယ်
ရှားဘုရားကိုပူဇေါ်သလိုပဲအကျိုးပေးတယ်-လို့ ဆိုထားတယ်လေ။ကြည်ညိုပူဇေါ်တဲ့သူရဲ့ 
ကောင်းမှု စိတ်ကလေးနဲ့ ခုလို တင်ပြထားတာတွေ့ရတော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကိုယ်စိတ်နှလုံး ရွှင်ပြုံးချမ်းမြေ့ပါစေဗျာ ..။
ပြီး ပြည့်စုံသော ပို့ စ်လေးပါပဲ.။
အခုလို ဘာသာရေး နဲ့ပက်သက်တာလေးတွေ ရွာထဲ မှာ လိုအပ်နေတာပါ။
နက်ဆိုင် ထိုင်ရင်း..ဘုရားလည်း ဖူးလိုက်ရတယ် ။
ဘု၇ားရဲ့ သမိုင်းဖြစ်စဉ်က အစ သိလိုက်ရပါတယ် ။
အများ..အကျိုးရှိစေမယ့် ပို့ စ်တွေကိုသာ တင်တတ်တဲ့သူမို့Mandalarthu ကို လေးစားစွာ….ခင်မင်..ကျေးဇူးတင်နေပါတယ်ခင်ဗျ။
သမုတိသစ္စာ ဆင်းတု၊စေတီ ဘုရားများမှသည်
ပရမတ် ဘုရား ကို ဖူးနိုင်အောင် ကျွန်ုပ်တို့ ထပ်ဆင့်ကြိုးစားဖို့လိုပါသည်။
သဲအင်းဂူဆရာတော်ကြီးမှ စေတီလေးပါးတရားတော်တွင် ထိုသဘောတရားကို သင်ပြထားလေသည်။
သမုတိသစ္စာဘုရားများကို အခွင့်ရရင် ဖူးမြော်ဖို့သင့်သလို….
တရားကို မြင်သောသူ သည်သာ ငါဘုရားကို မြင်သောသူဖြစ်လေသည်။ ဟူသော ဓမ္မပဒ ဆုံးမစာကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့မမေ့သင့်ပါချေ။
ဖတ်ရှုဝေဖန်ကြတဲ့အတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူးပါ။
ဆင်းတု၊စေတီ ဘုရားများမှ တဆင့် တက်ပြီးမှ သာ
၀ိပဿနာဥာဏ်မျက်လုံးဖြင့်မြင်နိုင်သော
ပရမတ် ဘုရား ကို ဖူးနိုင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်ုပ်တို့ ထပ်ဆင့်ကြိုးစားဖို့ လို ပါသေးတယ်။
“‘တရားကို မြင်သောသူ သည်သာ ငါဘုရားကို မြင်သောသူဖြစ်သည်” ဟုဆိုတဲ့မြတ်ဘုရားဧ။် စကားအတိုင်း
အခုရော ဘယ်နားမှာ ကိန်းဝပ်စံပ္ပယ်နေပါလိမ့် … ။
ထူးခြား လွန်းလို့ ကိုယ်တိုင် သွားဖူးချင်စိတ်ဖြစ်လာလို့ပါ
ဒီနေ့နေ့ လည် အခု နောက်ဆုံးရတဲ့ သတင်းက ဘုရားကို
မန္တလေးမှာ ဒီနေ ည အထိ နောက်ဆုံး ဖူးတွေ့ နိုင်ပါတယ်။
ယနေ့ တွင် ကိန်းဝပ်စံပ္ပယ်သီတင်းသုံးနေတဲ့ နေရာက- မ/ ၃၉၊ ရဲမွန်တောင် ၊ ၄၂-၄၃ ကြား၊၊ ၅၂×၅၃ ကြား။မန္တလေး။ မှာပါ။
နေရာကို အလွယ်တကူ မတွေ့ နိုင် ပါက .- မယ်တော်ကြီး- ၀၉-၂၁၅၀၃၀၅ ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
နက်ဖြန်ဆို ရန်ကုန်ကို ဘုရားက ကြွသွားတော့ မှာမို့ ပါ။
အချိန်မီ လေး သတင်းပေးလိုက်တယ်နော်
အဲ .. .မန္တလာသူရေ .. ကျွန်မကရန်ကုန်ကပါ … ဟီး … ။
ရန်ကုန်ဘယ်နားကို ကြွသွားလဲ သိပါရစေ … ဘာလို့လဲဆိုတော့ … နီးလျှင် လိုက်ဖူးချင်လို့ပါ … ။
အားတက်သရော သတင်းပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော် ။
ဟုတ်ကဲ့ ပါ အိတုန်ရေ….
အိတုန်လို သွားဖူးချင်စိတ်ရှိတဲ့ လူတွေ အတွက်နောက်ဆက်တွဲ သတင်းကို စုံစမ်းထားပါတယ်။
မန္တလေးကို ကြွမည့် နေရာက -သိပ္ပံလမ်း၊ဲမြို့ တော်ဆေးရုံနောက်ကျောဘက်လမ်းမှာပါ။
နေ့ံရက်ကတော့ - (၃-၁၂-၂၀၁၁၁)( သို့ )(၄-၁၂-၂၀၁၁) နေ့တရက်ရက်ပါ။
နေ့ ရက်ကို အတိအကျသိရ၇င် နောက်ထပ်သတင်းပြောပေးပါ့ မယ်နော်။
ခုကော ရန်ကုန်မှာပဲလားရှင်။ ဘယ်ကိုပြန်ကြွသွားသေးလဲ။ ဖူးမြော်လို့ရရင်သွားရောက် ဖူးမြော်ချင်ပါတယ်။ လိပ်စာလေးပြောပြပါဦးနော်။
ခုမှဘဲ ရန်ကုန်လိပ်စာကို စုံစမ်းသိရလို့ အချိန်မီ သတင်းပေးလိုက်တယ်။ဘုရားက အခု လက်ရှိ ရန်ကုန်မြို့ ၊သာကေတ(၁၀)လမ်း ၊တောင်ရပ်ကွက်၊တက်လမ်းအိမ်ယာ၊တိုက်နံပတ် (၉) မှာ နက်ဖြန်(ရ-၁၂-၂၀၁၁)နေ့ နံနက် (၉)နာရီ အထိ သီတင်းသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ နက်ဖြန်(၉)နာရီမှာတော့ ၇န်ကုန်မှ သံတွဲကို ကြွေ၇ာက်ပြီး သံတွဲမှာ (၅)ရက် သီတင်းသုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၂-၁၂-၂၀၁၁)နေ့ မှ ရန်ကုန်ကို ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်ပါတယ်။နေ၇ာ၇ှာ၇တာ အဆင်မပြေရင်ဖြစ်စေ ၊ဘုရားသတင်းကို ထပ်မံ သိလိုလျှင် ဖြစ်စေ ဘုရားကြွရာနောက် လိုက်ပါပို့ ဆောင်နေသော
မယ်တော်ကြီး- (ဖုန်း) 09-2150305 ထံ မည်သူမဆို ကိုယ်တိုင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်း နိူင်ကြပါတယ်။
ကြည်ညိုစိတ်အားမှန်ကာ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက် မြိုက်ဖူးတွေ့ နိူင်ကြပါစေ ။
ဘုရား ဒကာ မန်တလာသူလေးရေ
ဟုတ်ကဲ့ ပါ ကိုပေရေ
ဗျို့ ဆွံ့အနားမကြား သဂျီးမင်း….တခွန်းတလေလောက် ဟဖို့ အဘဘုရား တန်ခိုးတော်နဲ့ ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ ပေါက်ကရတော့ မပြောနဲ့နော် ယက္ခဘီလူးပုံကြီးစောင့်တယ်။။။။
နစ်ကိုးက ပညာရှိ မျောက်၃ကောင် သတိရတွားဘီ …..
ဦးကြောင်ကြီး ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာ သဂျီးမနေနိုင်တော့ဘူး တယောက်တည်းတောင် မဟုတ်ဘူး အဖော် အပေါင်းနဲ့ မိသားစုလိုက် ကို မျက်နှာလာပြတာနဲ့ တူတယ်။
အခု ..ဘုရားကရန်ကုန်ကို ပြန်ကြွသွားပါပြီ။
လိပ်စာကို စုံစမ်းပြီးသေချာ အကြောင်းပြန်ပေးပါ့ မယ်။
ဖူးချင်သူ တွေကို တကယ်ကို ဖူးခွင့်ရစေချင်ပါတယ်။
ဘုရားရှင်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၅၀၀ ကျော်ကတည်းက ခန္ဓာဝန်ချုပ်ငြိမ်းလို့ ပရိနိဗ္ဗာန် စံဝင်တော်မူသွားပါပြီ။
“နောင်ကို ဘယ်သို့ ဖြစ်ပါစေ” လို့ ဆန္ဒပြု အဓ္ဓိဌာန်ထားတာမျိုးကလွဲရင် တခြား ဘာမှ ထ မလုပ် တော့ပါဘူးထင်ပါတယ်။
အခုဖူးတွေ့ရတာကတော့ ဘုရားရှင်ရဲ့ ပုံတော်ကိုရည်မှန်းထုဆစ်ထားတဲ့ ဥဒိဿက ရုပ်ပွားစေတီတော် သက်သက်မျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီရုပ်ပွားတော်ကို ဟိုဟိုသည်သည် နေရာရွေ့အောင်တော့ တဦးဦးက လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာ နတ်သော်၎င်း၊ ရုက္ခစိုးသော်၎င်း၊ အခြား ……သော်၎င်း …..၄င်း…..၄င်း။
ကျုပ်စိတ်ဝင်စားတာက အဲသလိုလုပ်တာ ဘာရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်နိုင်သလဲပဲ ???
ဒါမှမဟုတ် ရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲ အလကားနေရင်း နေရာလျှောက်ရွေ့နေတဲ့သဘောလား ???
ဘုရားရုပ်ပွားတော်မှာ ဓါတ်တော်တွေ ကိန်းဝပ်နေလို့ တန်ခိုးတွေပြတယ်ဆိုရင်လဲ
တန်ခိုးတွေမပြတဲ့ အခြားနေရာအသီးသီးက ဓါတ်တော်တွေက အစစ်မဟုတ်လို့လား ???
ဓါတ်တော်တွေက နေရာတွေရွေ့တဲ့သဘော ရှိတယ်လား ???
ပြီးတော့ ဓါတ်တော်တွေမှာ အဘိဓမ္မာနည်းအားဖြင့် ခန္ဓာ ဘယ်နှစ်ပါးရှိလို့လဲ ???
မန့်ချင်တဲ့လူတွေအားလုံးမန့်ပြီးပြီထင်လို့ (တစုံတယောက်ကပေးခဲ့ဘူးတဲ့တာဝန်အရ) အဆုံးသတ်ကွန်မင့်လေး ရေးရပါတယ်။ ဖတ်မိသူများ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရင် ဆောရီးပါ။
ရုပ်ပွားတော်များ တန်ခိုးပြတယ်၊ မစတယ်ဆိုတာ အစောင့်အရှောက်နတ်များ ပြုလုပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သူတို့ချစ်ခင်နှစ်သက်ရင် ကူညီမစနိုင်ပါတယ်။ လူဆိုတာ လောဘသားလေ၊ နေရင်းထိုင်ရင်း ပွပေါက်တိုးရင် ဘယ်သူဝမ်းမသာဘဲ ရှိပါ့မလဲ။ ဘုပြောနေသူများလည်း ကိုယ်တိုင်မကြုံရသေးလို့ပါ၊ အမအစခံရရင် သဘောထားပြောင်းသွားပါမယ်။ သို့သော် ဦးပါလေရာ ပြောသလို ထပ်မံမျှော်ကိုးပြီး အလွန်အကျွံသဘော ဖြစ်သွားမိကြပါတယ်။ သဂျီးလေသံနဲ့ပြောရရင် များမျာ အမအစခံရတော့ လူတွေ ချမ်းသာလာပြီး သုံးစွဲနိုင်ကြရင် တိုင်းပြည်စီးပွားရေး မတိုးတက်ပေဘူးလား။ ဒါကြောင့်မို့ များများကိုးကွယ်ကြပါ….
လက်တွေ့ အားထုတ်တာဖို့ ပဲလိုတာပါ။
ကျွန်မ က ဘုရားဖူး သူ အများ ကုသိုလ်ယူနိုင်အောင် တင်ပြပေးတာပါ၊
ဥာဏ်ရဖို့ ကတော့ အားလုံးလက်တွေ့ ကြိုးစားရမှာပါရှင်၊၊
ယူတတ်လျှင်ဆေးပေါ့…..မယူတတ်ရင်တော့ဘေးလေ ……လို ရာ ယူဆပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား။ တင်တဲ့သူ ကို ကျေးဇူးမတင်ချင်ရင်တောင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်တွေဆိုရင်တော့ ဘုရားဂုဏ်တော်မှန်းပြီး ကြည်ညိုနိုင်တာပါပဲ။ ဘာသာခြား ဆိုရင်တော့ ဒီလို ဘုရားပုံတော်မြင်ရင် ကို ၀င်မဖတ်နဲ့လေ ။မကောင်းတော့လာမပြောနဲ့။သဘောပေါက်လား။ကိုယ့်စည်းနဲ့ကိုယ်နေလေ။ ၀ဋ်လည်မယ်မှတ် !!!
ယူတတ်လျှင်ဆေးပေါ့…..မယူတတ်ရင်တော့ဘေးလေ ……လို ရာ ယူဆပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား။ တင်တဲ့သူ ကို ကျေးဇူးမတင်ချင်ရင်တောင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်တွေဆိုရင်တော့ ဘုရားဂုဏ်တော်မှန်းပြီး ကြည်ညိုနိုင်တာပါပဲ။***phantom *** ဆိုတဲ့ အကောင့်က ဘာသာခြားတွေ ကဲ့ရဲ့ အောင် ကိုယ်က အရင်လမ်းကြောင်းပေးနေတာလား။ ဘာသာခြား ဆိုရင်လည်း ဒီလို ဗုဒ္ဓဘုရားပုံတော်မြင်ရင် ၀င်မဖတ်နဲ့လေ ။
ကျွန်တော်က ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ပါ ကိုရင်လဲဝတ်ခဲ့သလို ပဉ္ဖင်းလည်း တက်ပြီးသားပါ။ ကျွန်တော်ရေးခဲ့တာကို ကြိုက်သလို သဘောကွဲလွဲလို့ရပါတယ် ကျွန်တော်က တိတ္ထိအမြင်နဲ့ ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး တကယ်တော့ ကိုနေမ၀င်ပြောသလို ဘာသာခြားတွေ ကဲ့ရဲ့အောင်လမ်းကြောင်းပေးတာက ကျွန်တော်လား ဒါဆိုကျွန်တော်တစ်ခုပြောပြပါမယ် ရေသန့်ဘူးမှာ ဘုရားစွယ်တော်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ ဒါမျိုးတွေကို ဘုရားဂုဏ်တော်ကို ရည်မှန်းပြီး ကြည်ညိုနိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဘာသာခြားတွေအမြင်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျက်ကန်းယုံကြည်မှုနဲ့ အသိဥာဏ်နုံနဲ့မှုတွေကို မရီဘူးလို့ ပြောနိုင်ပါလား။ ဒါကို ကျွန်တော်က ထောက်ပြရင်ရော ကျွန်တော့်ကို ဒီလိုပဲပြောမှာလား။ ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ်အရာကိုဖြစ်ဖြစ် ဘုရားတန်ခိုးတော်လို့ မျက်စိမှိတ်ယုံနေတာနဲ့ အကုန်လုံးက ဘုရားတန်ခိုးတော်ပဲဖြစ်တော့မှာလား “ သစ်ပျံတော်သည် ရေကြီးချိန်များ တွင် မူလငုတ်ရင်းနေရာသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလေ့ရှိကြောင်း၊ ၎င်းတုံးကြီးပေါ်တွင် အ၀တ်များ လျှော်ဖွတ်မိပါ က ဖျားနာခြင်း၊ ၀မ်းလျောခြင်းများဖြစ်ပွားကြောင်း၊ ၎င်းတုံးပေါ်တွင် သား၊ ငါးများ ခုတ်စင်းမိပါက ရောဂါဘယ အမျိုးမျိုးဖြစ်ပွားခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ် အမျိုးမျိုး ကျရောက်ခြင်းများနှင့် ကြူံတွေ့ ရကာ နောက်ဆုံးတွင် အသက် ဆုံးရှုံးကြောင်းတို့ ကို ဒေသခံများမှ သတင်းပို့ ပြောပြကြပါသည်။ ” ကဲ ဒီစာသားကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဦး ဒီရဲ့ သစ်သားက ဘုရားမထုခင်ကတည်းက ထူးခြားချက်ရှိပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်က ဘယ်သူ့ကိုမှ ဒုက္ခ မပေးခဲ့ပါဘူး သူ့အသက်ကိုရန်ရှာခဲ့တဲ့ ဒေ၀ဒတ်ကိုလည်း ချမ်းသာပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်တို့တွေ စိတ်သန့်သန့်နဲ့ ဘုရားရှင်လို့ ရည်မှန်းကိုးကွယ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာသာခြားတွေ ကဲ့ရဲ့စရာဖြစ်မယ့် မျက်ကန်းယုံကြည်မှုနဲ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘုရားတန်ခိုးဆိုတာမျိုးကတော့ ဘယ်တစ်ခုက ကဲ့ရဲ့စရာကောင်းမယ်ဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ (သူများငြိုငြင်မှာစိုးလို့) သိပ်မပြောရဲတဲ့ အကြောင်းအရာကို ပြောပေးတာပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို အယူသန့်စင်စေလိုတဲ့စေတနာကို အထင်းသားတွေ့ရပါတယ်။
အိုကေပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။သဘောပေါက်သွားပြီ။
ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက ….. ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုမှန်းပြီးတော့ ပူဇော်ကြတာပါ။ လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံရှိရင် ငွေလှူဖြစ်မယ်။ ပန်းရှိရင် ပန်းလှူမယ်။ရေချမ်းရှိရင်ရေချမ်းလှူဖြစ်မယ်။ တတ်နိုင်သူများက တတ်နိုင်သလောက်လှူကြတာပါ။ ရွှေတွေငွေတွေ ဆင်ထားတယ်လို့မပြောကောင်းပါဘူး။
ကျွန်တော်လည်း သူများနဲ့ဆန့်ကျင်ဖို့ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး ။ဒါပေမဲ့ တင်ပေးတဲ့သူနဲ့ မိမိနဲ့ အမြင်ချင်းမတူ တာမျိုးတော့ရှိနိုင်တာပဲလေ။
ဘာသာခြားကဲ့ရဲ့မယ်ဆိုတာက …..ကျွန်တော်တို့ဘုရားက ရွှေငွေ ၀တ်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။ အမျိုးမျိုးသော ပူဇော်အထူးကိုခံယူ တော်မူ ထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား လို့ မြင်စေချင်တာပါ။ ကျွန်တော့်စာ ကိုဖတ်ရင်း တမျိုး ထင် သွားတယ်ဆိုလည်း မကန့်ကွက်ပါဘူး ။ လွတ်လပ်စွာကွဲလွဲခွင့်ရှိပါတယ် ။